Weelasha Macdanta Crypto, Macdanta Cusub ee Bitcoin, Unugga Macdanta Moobiilka - Tianqi
Tiknoolajiyada hogaaminta: Sanduuqa miinada ee mobilada loo yaqaan 'cryptocurrency' oo aan qaabeynay oo aan soo saarnay ayaa kaa badbaadin kara 70% qiimaha macdanta Intaa waxaa sii dheer, isku dheelitirnaanta kalsoonida ay ku shaqeyneyso waa mid aad u sarreeya, taas oo si wax ku ool ah u yareyn karta heerkulka waxayna sii dheereyneysaa nolosha adeegga mashiinka macdanta.
Tayo damaanad qaaday iyo qiimo jaban: Qiimaha sanduuqa miinada ee ay soo saartay shirkadda Tianqi Mining waa mid aan la diidi karin oo ku saleysan mabda'a tayada marka hore.
Isku-darka Sanduuqa Miinada Dhaqaaqa ee Biyaha
Faa'iidooyinka sanduuqa dhalada ee kaararka sawirada isku dhafan
cabir cabir sanduuqa ore-20-foot ah oo loogu talagalay 180 nooc, si loo weyneeyo booska
korsato naqshad isku dhafan oo laba jibbaaran, hawada sare banaanka, hawada dhinaca.
Xaqiiji wax soo saarka ballaaran iyo xawaaraha dhoofinta degdegga ah
Fadlan si naxariis leh u fiirso in danab gelinta loo baahan yahay ee T17 + ay tahay 220V.
Ganacsi caalami ah
Habayn gaar ah
Wada-tashiga waa la soo dhaweynayaa 365 maalmood sanadkii, waad nagala soo xiriiri kartaa emayl, taleefan, Skype / Facebook / twitter! Kooxdayada farsamada ee xoogan had iyo jeer waa diyaar u ah codsigaaga.
Ka dib markaan fahamno baahiyahaaga, waxaannu ku siin doonnaa talooyin xirfadeed iyo xigashooyin. Ka dib amarka la xaqiijiyay, shanteenna wax soo saar waxay bilaabi doonaan inay soo saaraan waqtigooda, oo ay sameeyaan kormeerro sida tijaabada waxqabadka iyo tijaabada tayada si loo hubiyo in shuruudahaaga si sax ah loo buuxiyo.
Kooxda iibka kadib waxay kuu diyaarin doonaan saadka ugu dhakhsaha badan iyo gaadiidka adiga, raad raac oo ku wargaliya nidaamka oo dhan si loo hubiyo imaatinka amniga adiga.
Dhib malahan in markii aad fikrado cusub ama fikrado ama badeecooyinka jira aysan dabooli karin baahiyahaaga. Noo sheeg dhammaan waxaad u baahan tahay, waxaan u qaabeyn doonnaa oo aan u soo saari doonnaa si waafaqsan shuruudahaaga si adag, oo waxaan kuu soo gaarsiin doonaa sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah.
Anagoo og baahidaada macdanta degdegga ah, waxaan ku dadaalnaa inaan yareyno wixii sababo aan fiicnayn ka hor dhalmada. Haddii aad jeclaan laheyd inaad doorato badeecadeena, waxaan ku rakibi doonaa goobta. Xirfadeena xirfadeed, waxaan u adeegsan karnaa sanduuqa miinada sida ugu dhaqsaha badan. Sidaas ayaa waqtigaaga qaaliga ahi ku badbaaday.
crypto macdanta asic, weelka btc, weelka antbox, loo adeegsaday qalabka loo yaqaan "crypto", weelka antminer-ka, weelka bitmain,